Tongasoa mpitsidika voalohany an-tapitrisany i Jamaika hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-1
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Tongasoa mpitsidika voalohany an-tapitrisany i Jamaika hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-1
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Daynel Williams (ankavia), miaraka amin'ny zanany kely, dia maneho hafanam-po amin'ny filazan'ny minisitry ny fizahantany, Hon Edmund Bartlett (faha-3 ankavanana) fa mpitsidika fijanonana an-tapitrisany any Jamaika izy nanomboka ny fiandohan'ny COVID-19 Pandemie. Ary koa, mizara amin'izao fotoana izao, mandritra ny fandraisana an-tsitrapo ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sangster hanamarihana ny dingana lehibe omaly (15 Aogositra), dia ny (LR) Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny MBJ Airport, Shane Munroe; Talen'ny varotra isam-paritra, Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly ary filohan'ny Fikambanan'ny mpizahatany sy hotely ao Jamaika, Clifton Reader.
Fahagagana nampitomany ny mpandeha JetBlue iray sy ny fianakaviany satria ny indostrian'ny fizahan-tany ao Jamaika dia nanamarika dingana lehibe iray tamin'ny fandraisana ireo mpitsidika mijanona an-tapitrisany tao anatin'ny 13 volana, tao anatin'ny areti-mandringana.
Ilay mpandeha an-tapitrisany tonga tany Jamaika teo afovoan'ny COVID-19 dia notolorana fanomezana rehefa tonga.
Anisan'ny fanomezana raisina an-tànana ny tapakila iray, manan-kery mandritra ny herintaona, hanomezana ny fianakaviana manontolo fialan-tsasatra mandritra ny 4 andro 3-alina ao Royalton.
Tamin'ny telovolana farany teo, nitombo 5,000% ny fizahan-tany any Jamaika tamin'ny fahatongavana.
Daynel Williams, niaraka tamina mpianakavy efatra, dia nampiseho fifaliana lehibe rehefa nesorina tamin'ny laharan'ny mpandeha tao JetBlue avy any New York izy omaly 15 aogositra, ho avy ny ekipa tompon'andraikitra notarihin'ny minisitry ny fizahantany, Hon Edmund Bartlett. Nomena fanomezana sy fiarahabana avy amin'ny fo izy tamin'ny naha-mpitsidika an-tapitrisany azy hatramin'izay Nisokatra indray i Jamaika ny sisin-tany mankany amin'ny fitsangatsanganana an'habakabaka iraisampirenena tamin'ny 15 Jona 2020. Nakatona ny sisintany rehetra tamin'ny volana martsa 2020, nanapaka ny fahatongavana rehetra nanomboka ny valanaretina coronavirus, COVID-19, nanomboka nitondra ny tolony.
Mamihina zaza eny an-trotroany raha mbola mitana ny akanjony kosa Ramatoa Williams, saika tsy nahateny intsony Ramatoa Williams fa afaka namerina "Andriamanitra ô!" rehefa nanandrana nitana ny hafaliany izy rehefa nilaza taminy ny minisitra Bartlett fa izy no mpitsidika fijanonana an-tapitrisany, izy izao no ivon'ny fifantohana iraisampirenena, nifanehitra tamin'ny solontenan'ny haino aman-jery marobe nitetika ny hitifitra azy sy ny fianakaviany.
Ny rafozam-baviny, Jennifer Williams, Jamaikana avy any Oracabessa, St Mary, dia tototry ny hafaliana rehefa nitomany izy. “Nandehandeha nitety an'i Jamaika nandritra ny 30 taona mahery aho izao ary tsy mbola nisy izany; Tena faly aho, te hitomany. ” Navelany handeha ny ranomasom-pifaliana vitsivitsy, ary nanampy hoe: “Faly be aho, tena faly tokoa. Tsy afaka milaza izay tsapako aho. ”
Anisan'ny fanomezana noraisina ny tapakila iray, manan-kery mandritra ny herintaona, hanomezana ny fianakaviana manontolo fialan-tsasatra 4 andro 3-alina ao Royalton, natolotry ny talen'ny varotra ho an'ny Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly.
Raha niresaka ny lanjan'io fotoana io ny minisitra Bartlett dia nilaza hoe: "Ity dia dingana lehibe teo amin'ny tantaran'ny fizahan-tany, tsy mbola nisy toy izany, tao anatin'ny herintaona sy iray volana izay dia nisy mpitsidika nijanona iray tapitrisa tonga teto amin'ny firenentsika." Talohan'ny COVID-19 dia naharitra 20 taona i Jamaika hanoratana ny fahatongavany tapitrisa voalohany tao anatin'ny herintaona. Na izany aza, hatramin'ny 2019, taloha kelin'ny nitrangan'ny areti-mifindra, dia nihoatra ny 4 tapitrisa ny fijanonana sy ny fahatongavan'ireo sambo.
Hatramin'ny nanokafana ny sisintany tamin'ny 15 Jona, tamin'ny taon-dasa, ny fizahan-tany dia nahazo $ 1.5 miliara dolara amerikana ary maherin'ny 50,000 amin'ireo mpiasa 130,000 noroahina, dia tafaverina miasa indray. Ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sangster fotsiny dia nahitana 5,000 7,000 tamin'ireo asany XNUMX naverina amin'ny laoniny.
Nilaza Andriamatoa Bartlett tamin'ny telovolana lasa teo fa "nitombo 5,000 isan-jato ny mpizahatany" ary nitombo koa ny karama, "ka tsy isalasalana ny amin'ny fiantraikan'ny fizahan-tany any Jamaikaprograma fanarenana ara-toekarena. ”
Anisan'ny lanonana fandraisana miaraka amin'i Minster Bartlett sy Ramatoa Casserly, ny talen'ny fizahan-tany, Donovan White; Filohan'ny Fikambanan'ny Hotely sy mpizahatany ao Jamaika, Clifton Reader; Lehiben'ny mpanatanteraka (CEO) an'ny MBJ Airports, Shane Munroe ary ny filoha sy ny CEO an'ny foibe fitantanana seranam-piaramanidina ao Jamaika, Audley Deidrick.